Mayelana NATHI - Owon Technology Inc.
Abakhiqizi: Owon Technology, Inc.
I-OWON Technology (ingxenye yeLILLIPUT Group) iyi-ISO 9001: 2015 Certified Original Design Manufacturer egxile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemikhiqizo ehlobene ne-elekthronikhi ne-IoT kusukela ngo-1993. Isekelwa isisekelo esiqinile kumakhompyutha ashumekiwe, ekubonisweni kwe-LCD nobuchwepheshe bezokuxhumana okungenantambo, i-OWON inikela ngemikhiqizo ejwayelekile ye-IoT kanye nezixazululo ze-IoT ezenzelwe izinsiza, ama-Telco, ama-cable opharetha, abakhi bezindlu, ukuphathwa kwempahla, osonkontileka, abahlanganisi bohlelo, neziteshi zokuthengisa.
Ezingeni ledivayisi, ngaphezu kokuhlinzeka ngamamodeli ajwayelekile ahlukahlukene, i-OWON ibuye idale futhi ikhiqize ukucacisa izidingo zamakhasimende ukufanisa izinhloso zabo zobuchwepheshe. Ezingeni lohlelo, ngaphezulu kwezinhlelo zokuhlala ze-IoT ezingekho eshalofini, i-OWON iphinde inikeze i-Open-API ephelele yokuhlanganiswa kwesistimu ukufeza izinhloso zebhizinisi lethu ezihlukile.
—— ODM Service——
- Dlulisela imibono yakho kudivayisi noma ohlelweni olubonakalayo
I-OWON inesipiliyoni kakhulu ekuklanyeni nasekwenzeni ngokwezifiso amadivayisi kagesi acaciswe izidingo zekhasimende. Singanikela ngemisebenzi egcwele yezobuchwepheshe ye-R & D kufaka phakathi ukwakhiwa kwezimboni nokwakhiwa, i-hardware ne-PCB design, i-firmware kanye nokwakhiwa kwesoftware, kanye nokuhlanganiswa kwesistimu.
—Isevisi Yokukhiqiza Engabizi kakhulu ——
- Diliva insiza ephelele yokufeza inhloso yakho yebhizinisi
I-OWON ibilokhu ihlanganyela ekukhiqizeni ivolumu yomkhiqizo we-elekthronikhi owenziwe ngokwezifiso futhi owenziwe ngokwezifiso kusukela ngo-1993. Kuyo yonke le minyaka, i-OWON iqongelele ulwazi oluningi kanye nekhono ekukhiqizeni umkhiqizo, njengeMass Production Management, Supply Chain Management, Total Quality Management, njll.
● Isu eliqondiswe kubuchwepheshe elenza ikhono lomsindo le-R & D kanye nokuqaliswa kobuchwepheshe.
● Iminyaka engama-20 yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza ixhaswe nge-chain evuthiwe nephumelelayo.
● Ukuzinza kwabasebenzi okuzinzile nokungaguquguquki kanye nokubandakanyeka kwabasebenzi okusebenzayo ngenxa yesiko lobumbano "Lokuzithoba, Ukwabelana kanye nempumelelo".
● Inhlanganisela ye- "Ukufinyeleleka Komhlaba Wonke" ne- "Made in China" iqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuseqophelweni eliphezulu ngaphandle kokudela ukusebenza ngempumelelo kwezindleko.